Tafiotra mahery vaika narahina orana sy tselatra ary kotrobaratra no nianjady ny sekolim-panjakana izay ivon-toeram-panadinana teo amin’ ity renivohitry ny distrika ity, raha voaendaky ny rivo-mahery ny tafo. Tapaka noho izany ny fanatanterahan’ireo kilasy famaranana ny taranja tamin’ny fanadinam-panjakana tamin’io hariva io. Araka ny voalazan’ny loharanom-baovao any an-toerana, potika koa ny tranom-panjakana sasany tahaka ny biraon’ny distrika, ny ampahany amin’ny biraon’ny zandary ary tranon’ny fianakavaina iray izay nianjeran’ny hazo lehibe nidoroboka. Ankoatra ny renivohitry ny distrika, misy tanàna maro ihany koa niharam-pahavoazana teny amin’ny manodidina.
Maro ireo ivontoeram-panadinana no nahitana olana, ankoatra ity niharan’ny loza voajanahary ity ka azo heverina ny ho famerenana amin’ny ampahany ny fanadinan’ireo mpianatra, raha tsy izany very ny ezaka nandritra ny herintaona. Marihina fa vao vita izao fanadinam-panjakana izao, indrindra ny mpianatry ny teknika dia hiroso amin’ny taom-pianarana vaovao avy hatrany ka tsy hisy fialantsasatra ho an’ireo izay mety tsy mahomby. Vao mainka hampadonto ireo tsy nambinina hatrany izany tsy fisian’ny fakana aina izany.
Ravan’ny tafiotra ny fanadinana bakalôrea sy ny tafon-trano maro tao Andramasina